नेपाल लाइभ बिहीबार, जेठ १५, २०७७, २२:४५
काठमाडौं- सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा विनियोजन गरिएको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा सबैभन्दा धेरै शिक्षा मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएका हुन्। शिक्षा मन्त्रालयको बजेट गत वर्षको भन्दा ४.८५ प्रतिशतले बढेको छ।
त्यस्तै सबैभन्दा धेरै गृह मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ३८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका हुन्। तेस्रोमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लगि एक खर्ब ३८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ। अर्थ मन्त्रायल वित्तीय व्यवस्थाका लागि एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ बजेट रहेको छ।
बजेटको सबैभन्दा धेरै ध्यान स्वास्थ्य तर्फ रहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यको बजेट ६८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ रहेको छ। कोरोना रोगको नियन्त्रण तथा रोकाथामका लागि आगामी आर्थिक वर्ष केन्द्रित रहनु पर्ने भएकाले ३१.८५ प्रतिशतले बजेट बढेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति कार्यालयको बजेट कटौती गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रपतिको लागि १६ करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्रपतिको लागि २५ करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै संघिय संसद तथा प्रदेश प्रमुखहरुको बजेट पनि घटाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि संघिय संसदको बजेट एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहको वित्तीय समानीकरण अनुदान तर्फको बजेट बढाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ८९ अर्ब ९४ करोड रुपैया बजेट प्रदान गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक खर्ब एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा अदालतको लागि ६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको छ। अदालतको लागि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बढाइएको छ।
यस्तो छ आगामी आर्थिक २०७७/७८ का लागि विनियोजन गरेको बजेट
बजेट (रु. लाखमा)
महालेखा परिक्षकको कार्यालय
उद्योग तथा बाणिज्य आयोग
उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
कृषि तथा न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय
भुमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय
भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
अर्थमन्त्रालय वित्तीय व्यवस्था
अर्थमन्त्रालय आन्तरिक ऋण भुक्तानी
अर्थमन्त्रालय वैदेशिक ऋण भुक्तानी बहुपक्षीय
अर्थमन्त्रालय वैदेशिक ऋण भुक्तानी द्धिपक्षीय
अर्थमन्त्रालय कर्मचारी सुविधा तथा सेवानिवृत्त सुविधा
प्रदेश (समानीकरण विशेष र समपुरक अनुदान)
स्थानीय तह (समानीकरण विशेष र समपुरक अनुदान)
अझै तीन दिन वर्षाको सम्भावना मनसुन न्यूनचापीय रेखा नेपालको तराई भूभाग नजिकै रहेकाले सोमबारसम्म उक्त प्रणालीको असर रहने भएको हो। हाल देशभर सामान्य बदली रही सबै प्... शनिबार, असार २७, २०७७
रुपन्देहीमा जंगली च्याउ खाँदा चार जना बिरामी रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका– १ मा विषालु च्याउ खाँदा एकै परिवारका चार जना बिरामी परेका छन्। शुक्रबार साँझ जंगलबाट ल्याइएको च्याउ... शनिबार, असार २७, २०७७